Yarga - နေရောင်ခြည်သင်္ကေတ Russ
Yarga - ကဘာသင်္ကေတများနှင့်အလေ့အကျင့်
ဟာဆလဗ်လွန်ခဲ့တဲ့4ထောင်စုနှစ်၏အာရိယန်အစဉ်အလာကနေဒီစနစ်ချေး။ သူတို့ကအလင်းအားဖြင့် Yaroslavl ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကိုခေါ်ပါ။ နေ့စဉ်သင်ခန်းစာများ၏ 20 မိနစ်ကျောရိုးနှင့်ပူးတွဲ mobility ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လျှော့ချနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များပုံမှန်နှင့်အရေးပါသောအစွမ်းအင်လှုံ့ဆော်နှင့်ကြွက်သားသေံဦးဆောင်လမ်းပြ စိတ်ဓါတ်များတိုးတက်စေ ။
Yarga - ကဘာလဲ?
Slavic ယောဂ Yarga ခေတ်သစ်ယောဂမှမြင့်တက်ပေး၏ပေမယ့်, ယောဂအကြောင်းဆောင်းပါးများနှင့်စာအုပ်များရာပေါင်းများစွာတိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့် YARGEO ယူနစ်တွေအကြောင်းကြား၏။ အသိပညာပေးဖို့ Access ကိုသာဝိဇ်ဇာဆရာတို့ရရှိသောနှင့်ဘုရားသခငျ့ပြစ်ဒဏ်၏နာကျင်မှုအောက်မှာထားရှိမည်။ နေ့စဉ် 20 မိနစ်အလေ့အကျင့်, စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာစေခြင်း, ဆယ်လူလာ level မှာခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းတိုးမည်, အိုမင်းနှေးကွေးခြင်းနှင့်အသက်တာရှည်။ အားကစားအမျိုးသမီးတွေလှပသောကိုယ်ဟန်အနေအထား, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး returnees ။ အဆိုပါဝေဒအစဉ်အလာအတွက်အတိုးပြန်လည်မွေးဖွားချိန်တွင်ယနေ့, Yarga ပြန်လည်မွေးဖွား။ ဒါဟာကိုအသုံးပြုသည်:
Yarga - ကွေးကြီးစွန်းနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံစံပုံဖော် Slavic ဇာတ်ကောင်။ စွန်းကို 90 ဒီဂရီသို့မဟုတ်ကို arc angled နေကြသည်။ နိမိတ်လက္ခဏာသည်နေရောင်ခြည်နှင့်ဘဝကိုကိုယ်စားပြုတစ်ခုကိုနေ့စဉ်အရာဝတ္ထု, လက်နက်နှင့်အဆောက်အဦးများ, အမျိုးသားရေးဝတ်စုံနှင့်အလံ၏ဓါးသွားလက်နက်များ element တွေကိုအသုံးချခဲ့ပါတယ်။ ရောဂါနှင့်အချိန်မတန်မီသေမင်း၏ - ထိုဟာဆလဗ်ကငြူစူခြင်းနှင့်နတ်ဆိုး၏ပရိယာများနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကနေအိမျတျောကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်, စ. စစ်သူရဲတို့အားအစွမ်းသတ္တိအားပေးသည်ယုံကြည်သည်။
Yarga - နေရောင်ခြည်သင်္ကေတရု, ပထမဦးဆုံးအကြားအသုံးပြုရတော့တယ်။ ရှေးခေတ်အခြေချနေထိုင်မှုများနှင့်သင်္ချိုင်းကုန်းများက်ဘ်ဆိုက်များမှာရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်သူတို့ကကမ္ဘာ၏လေးနှစ်ဖက်ပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သက်သေခံ - နေရောင်ခြည်နိမိတ်လက္ခဏာပုံစံ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် Kolovraty မျက်နှာစာပေါ်နှင့်အသင်းတော်များ၏အတွင်းပိုင်းထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်လေးနက်တဲ့ဘာသာရေးအရေးပါမှု swastikas သင်္ကေတအတည်ပြုပါ။
Rune က Yarga
Yarga Slavic - သန့်စင်ခြင်းနှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း၏ Rune က။ အဆိုပါဝေဒအစဉ်အလာ၏နောက်လိုက်များ, သာယာသောဖြစ်ရပ်များနှင့်သတင်းကိုဆွဲဆောင်တဲ့ကောင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ဆက်ဆံပါ။ Rune ကယင်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအဘို့အဆင်သင့်အခြေအနေများညွှန်ပြအသစ်တစ်ခုဖှံ့ဖွိုးတိုးတသံသရာကိုကိုယ်စားပြုနှင့်ဤသယံဇာတအပြောင်းအလဲများအတွက်လိုအပ်သောအဖြစ်ပိုက်ဆံဆွဲဆောင်။ စိတ်ကူးများ၏အောင်မြင်မှုနှင့်စီမံကိန်းဖို့ဇာတ်လမ်းအချက်များအတွက်ကျဆင်းသွားကြောင်း Yarga ။ Runic သင်္ကေတအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများတစ်အစွမ်းထက်နေကြတယ်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာ Yarga-အဆောင်လက်ဖွဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ရှည်ပေးသည်ဟုယုံကြည်စွမ်းအင်နှင့်အသက်ရှင်စေတတ်သောအင်အားစုနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ဖြည်ဖြစ်ပါတယ်။
Slavic ယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင် Yarga swastika, ဒါပေမယ့်လက်တွေ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်စကားလုံးများ၏ဖော်ပြချက်နှင့်အတူဂါထာမရသာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာများ, အပြင်းအထန်နေမကောင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကောင်းသောအကြောင်းတရားများအဘို့တန်ခိုးကို ခံရ. , ထိုမုသာစကားနှင့်သစ္စာဖောက်အသိအမှတ်ပြုရန်, အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးဖို့စကားများခိုးသုံးပါ။ လိုချင်သောရလဒ်ရရန်, ဂါထာကျယ်လောင်စွာ 70 ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုချက်မြည်လေ၏။ နှစ်ဦးစလုံးဂါထာ, အလုပ်လုပ်ဖို့ထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်အဆရာနဲ့ချီရှိ အတညျပွု ။ ဆုံးရှုံးမှု, ပျက်စီးယိုယွင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားပါဝါကိုဆွဲဆောင်ကူညီရန် - ယခင်သုခချမ်းသာများပိုက်ဆံ, ဒုတိယဆွဲဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်။
TAROHORO CHARODORO YARGA Drago အလေးချိန်။
Trad ISTRA WEIGHT YARGA LADODEYA ။
Yarga - လေ့ကျင့်ခန်း
ရှုပ်ထွေးသော "Yarga, သစ္စာဉာဏ်အလင်း၏လမ်းကြောင်းကို, Slavic ယောဂ '' အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းပေါင်းစပ်နှင့် (Asana ဟာ) ထားတော်မူ၏။ ဒါဟာအိမ်တွင်းနှင့်အိမ်ပြင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝကျကျနုပျိုဖို့ကိုယျခန်ဓာကိုလှုံ့ဆော်ဖို့, တကိုယ်လုံးကိုထိခိုက် Postavy ။
သည် "ကောင်းကင်ဘုံမှလမ်းမကြီး" ထားပါ။ ရပ်နေဖျော်ဖြေမိမိခေါင်းကိုအထက်တွင်ကြီးပြင်းကိုယ်လက်နှင့်စွန်ပလွံအတွင်းနှစ်ဖက်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆန့်ကျင်ဖိနေကြသည်။ ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ခြေလျင်ညာဘက်ခြေထောက်ပေါ်ကျိန်းဝပ်ကွေးဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်နှုတ်တော်မူရန် "သုံးပါးတစ်ဆူ" ။ ခြေထောက်ကျယ်ပြန့်ခြားပြီး, ခန္ဓာကိုယ်ညာဘက်စောင်း။ လက်ျာသည်လက်ျာခြေမ, left - အထက်သို့။
"မြင်း" ခဲ့ကြသည်။ လက်ဝဲလက်ျာဘက်ခြေထောက်ထောက်ခံမှု, - ကြမ်းပြင်တစ်ဦးညာဘက်ထောင့်မျဉ်းပြိုင်မှာကြီးပြင်း။ လက်ျာလက်ကိုကြမ်းပြင်ကိုထိ, လက်ဝဲ - အထက်သို့။
ကယ်နှုတ်တော်မူရန် "Jari" ။ အဆုတ်လက်ျာခြေမ, လက်ပိတ်ထားကြသည်, ထ palms ။
"ဖား" မကယ်မလွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ အနေအထားစတင်ခြင်း - ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ squatting, ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလက်, ချ palms ။ ရာထူးပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိရင်ကြောင့်ကြမ်းပြင်ကိုချွတ်လက်အားဖြတ်နှင့်သင့်တံတောင်ဆစ်ချိုးအညီဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သင်များ၏ရှေ့မှောက်၌မိမိလက်ကိုတင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
အဆိုပါဂါထာ "om မဏိ padme hum"
တက်တူးထိုးကိရိယာအစုံ - တန်ဖိုးကို
Sodalite သောကျောက် - မှော်ဂုဏ်သတ္တိများ
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့် Chakra ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Lotus Tattoo - တန်ဖိုးကို
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက် - မှော်ဂုဏ်သတ္တိများ
ပိုက်ဆံဆွဲဆောင်ဖို့ Ganesh ဂါထာ
Kylie Jenner သူ့ကုမ္ပဏီ၏လုပျငနျးအတှကျအလှကုန်၏ဝယ်လက်တောင်းပန်
ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့အသား - အရသာနှင့်မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများ savory အာရှဟင်းလျာများ
La Boite ပြဇာတ်ရုံ
အဲလ်ဆာ Pataky နဲ့ Chris Hemsworth သြစတြေးလျကမ်းခြေအပေါ်စိတ်အားထက်သန်မှုပြသ
ဘယ်လောက်ပရိုတိန်း buckwheat သနည်း
လမ်းဖက်ရှင် - ဆောင်းရာသီ 2017
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီ - အားလုံးအခါသမယများအတွက်ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များဓါတ်ပုံများတစ်ရွေးချယ်ရေး
ဝက်သားနံရိုး - စာရွက်
Turner syndrome ရောဂါ - ပုံမှန်အသက်တာ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ?